Nsọpụrụ ụbọchị: akụkụ adịghị ike anyị | EKPERE NA OZI
Nsọpụrụ ụbọchị: akụkụ adịghị ike anyị
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 29, 2020 Ọktoba 29, 2020
Anyị niile nwere ya. Ezughị okè na ntụpọ jikọtara okike anyị mebiri emebi. Childrenmụ nile nke Adam, anyị enweghị ihe ọbụla ga-anya isi maka ndị ọzọ; onye ọ bula anāchọsi ike nke-uku ka ọ bu; ọ bụ nzuzu ịchị ọchị maka ntụpọ nke ndị ọzọ nwere ọtụtụ ntụpọ ndị gbara anyị gburugburu; ọrụ ebere na-enye iwu; Ọmịiko onye ọ bụla - Ma n’etiti ọtụtụ adịghị ike ọ bụla enwere otu maka onye ọ bụla, onye, ​​dị ka eze nwanyị, karịrị ya niile; ikekwe gị, ndị ìsì, amaghị ya, ma onye ọ bụla na-emeso gị maara ka esi ekwu: Nke a bụ adịghị ike gị ... Ikekwe nganga, ikekwe adịghị ọcha, iri nri, wdg.
Otú o si egosipụta onwe ya. Onye ọ bụla chọrọ, ọ naghị esiri ya ike ịmara ya: ọ bụ mmehie ahụ ka ị na-ahụta na nkwupụta gị niile; ọ bụ nkwarụ ahụ kachasị dịka ọnọdụ gị si dị, nke na-ewere ọnọdụ n'oge ọ bụla ma na-akpata mmejọ ugboro ugboro; ntụpọ ahụ nke kachasị ajụ gị ịlụ ọgụ, nke na-abanye n'echiche gị na mkpebi gị oge niile, na-atọkwa agụụ gị ndị ọzọ ụtọ. Kedu ihe ọ bụ n'ime gị? Olee mmehie ndị ị na-ekwuputa mgbe niile?
Gịnị bụ adịghị ike anyị. Ọ bụghị naanị obere ntụpọ, mana nnukwu agụụ nwere ike iwetara anyị mbibi dị ukwuu ma ọ bụrụ na edozighi ya. Ike adịghị Ken. Adịghị ike nke Magdalene bụ omume anụ ahụ, lekwa ndụ ọ biri na ya! Avarice bu adighi ike nke Judas ma rara Nna-ukwu nye n'ihi ya ... Adịghị ike gị nke mpako, ihe efu, iwe ... ị nwere ike ịkọ ihe ọ nwere ike ịdọrọ gị?
OMUME. - Gụọrọ Pater, Ave na Gloria na Mmụọ Nsọ iji mee ka ị mara. Jụọ onye nkwuputa ihe adịghị ike gị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Tugharia uche na nkwenye Nna gi na ndu gi
Next Post → Post ozo:Bọchị atọ nke ịsọpụrụ mmụọ ozi anyị na-eche nche iji nweta amara achọrọ